Fanakatonana Tampoka Ny Sisintany Nampihitsoka Afghana Mpitsoa-Ponenana An’Arivony Ao Gresy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2016 8:01 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Ελληνικά, македонски, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Saripikan'i Marianna Karakoulaki.
Tao anatin'ny volana vitsivitsy izao dia maro tokoa ny mpialokaloka nandositra ny tanindrazany ravan'ny ady ao Afovoany Atsinanana, mananda ny ainy [mg] hiampita an'i Eoropa, manantena filaminana ho azy ireo sy ny fianakaviany.
Tsy voarary felan-draozy, anefa, ny lalana mizotra mankany Eoropa. Hatramin'ny volana Novambra, dia ireo manana zom-pirenena telo ihany—Syriana, Irakiana, ary Afghana—no nahazo alalana hiampita an'i Eoropa, manavatsava ny “Lalana tsizarizarin'i Balkan” [fr]. Vao maika miha-tsizarizary izany lalana izany ho an'ny Syriana sy Irakiana mpialokaloka, taorian'ny fitakiana antonta-taratasy vaovao nataon'ny firenena maro ao Balkana tsy maintsy ampisehoan'ny mpitady fialokalofana karapanondro na pasipaoro, miaraka amin'ny taratasy azon'izy ireo tany amin'ny Nosy Grika [mg]. Mandritra izany fotoana izany anefa dia tsy mahazo alalana hankany Eoropa avaratra intsony ny mpialokaloka mitondra visa tiorka, ary nanakatona tanteraka ny sisintaniny amin'ny Afghana ny Repoblikan'i Makedonia.
Miorina eo amin'ny sisintany mampisaraka an'i Gresy sy Makedonia ny tanànan’Idomeni ary toerana voalohany fandaozan'ny mpialokaloka tanteraka ny tanindrazany izorany mankany amin'ny tanibe eoropeanina, ka vavolombelona mahita maso ny fiovana tsy hita na aiza na aiza ao Gresy io tanàna kely io. Talohan'ny krizy dia teo ambany fanaraha-mason'ny mpanao trafika ny faritra. Vao haingana kokoa dia nampiantrano tobim-pifindrana ny faritra ary mampiatrano toby miaramila amin'izao fotoana izao.
Ny fantsona 4 News nitatitra ny ezaky ny mpanao gazety hitsongo dia ireo mpaka an-keriny mitazona ny mpifindramonina hatakalo volan'ny aina :
Koa satria hipoka mpialokaloka i Idomeni, dia misy toby vonjimaika hafa miaraka amin'ny fitaovam-pandraisana olona najoro 20 kilaometatra miala ny faritra, ao amin'ny tobim-piara foana betsaka tobin'etona iray.
zazalahy iray mitondra tapakazo atao kitay eo akaikin'ny tranolay onenany, 20 kilaometatra miala an'i Idomeni. Saripikan'i Marianna Karakoulaki.
Noho ny fahazoam-baovao voafetra sy ny harerahana vokatry ny fatoriana fatoriana anaty tranolay sy bus tsy misy hafanana , dia mpitady fialokalofana an'arivony no nanapa-kevitra handeha an-tongotra 20 kilaometatra mankany Idomeni, izay toby efa feno tanteraka sy fahelan'ny fombam-pisavana eny amin'ny fisavana sisintany no miandry azy ireo.
Olona an'arivony mandeha an-tongotra 20 kilaometatra, handehanana any amin'ny sisintany fiampitana ao Idomeni. Saripikan'i Marianna Karakoulaki.
Nilaza ny pejy Facebook “Are You Syrious” fa olona 500 ihany no mahazo alalana hankao Makedonia anelanelan'ny amin'ny enina ora maraina ka hatramin'ny enina ora hariva tamin'ny alatsinainy 22 febroary. Araka ny tatitra dia tonga eo amin'ny sisintany ny manampahefana hanamarina hatramin'ny antsipirihany ny antonta-taratasy sy ny kara-panondron'ny rehetra.
Mpialokaloka Syriana sy Irakiana milahatra mandritra ny ora maro, mandrapisavan'ny polisy sy zandary makedoniana ny taratasin'izy ireo. Saripikan'i Nicolas Economou, nahazoana alalana.
Miandry ao anatin'ny filaharana ny mpialokaloka avy any Afghanistan, tsy mahalala fa tsy hahazo alalana hiampita sisintany ry zareo. “Tonga teto izahay tamin'ny Asabotsy. Fa maninona ry zareo no tsy mamela anay hiampita?” hoy ny fanontanian'ny tanoralahy Afghan iray antsoina hoe Sam tamin'ny mpanangom-baovaon'ny Global Voices tonga tao an-toerana. “Avelao izahay hiampita dia akatony ny sisintany. Nandao an'i Afghanistan aho satria misy ady any: baomba isan'andro, tsy misy asa, tsy misy ampitso. Mila manohana ny fianakaviako aho.”
Rehefa nihanandroso ny fotoana ary kely ny vaovao tonga dia nihahenjana ny toe-draharaha ary nanomboka nanao fihetsiketsehana ny mpialokaloka, mitaky ny idirana any Makedonia.
Afghan mpialokaloka manao fihetsiektsehana tsy misy herisetra, mitaky ny hamelana azy ireo ho ao Makedonia. Saripikan'i Nicolas Economou, nahazoana alalana.
Mitondra sora-baventy nosorata-tanana mitaky ny hanokafana ny sisintany ny kilonga madinika nafindra ho eo anoloan'ny vahoaka, ka eo no ifampiresahany amin'ny manamboninahitra polisy grika. Rehefa naharitra adiny roa ny fijoroana da niezaka nanosika ny sakan'ny polisy ny vahoaka (andian'olona mivory), mizotra mankany amin'ny fiampitana sisintany, ary teo no nandravan'ny olona ilay fefy vy kely manakaiky ny lalamby, ary tafiditra an'i Makedonia ry zareo rehefa ela ny ela.
Ankizy Afghan mitazona sora-baventy nataon-tanana mitaky ny hanokafana ny sisintany. Saripikan'i Marianna Karakoulaki.
“Nandao an'i Afghanistan aho efa ho iray volana izay. Maty ny zanako ary miaraka amin'ny vadiko aho. Fantatrao ve hoe inona no hitranga manaraka?” hoy ny fanontanian'ilay vehivavy antsoina hoe Zahra tamin'ny teny anglisy lavorary, izay nolazainy fa nianarany tamin'ny alalan'ny fijerena sarimihetsika. “Fa maninona no aminay izao no mitranga? Fa maninona ry zareo no tsy mamela anay hiampita?”, hoy i Zahra manontany ny rehetra amim-pitadiavana fatratra ny valiny.
Lehilahy iray mitazona ny pasipaoro Syriana (iray amin'ny antonta-taratasy miantoka ny fiampitana mankao Makedonia). Saripikan'i Nicolas Economou, nahazoana alalana.
Heverina ho mbola henjana ny toe-draharaha ao Idomeni, satria mbola hiverimberina ity toe-draharaha ity mandritra ny herinandro, satria an'anrivony ny olona mitady filaminana sy hoavy tsaratsara kokoa. Hatreto aloha dia ny pasipaoro ihany no hany fanantenana.